Ambohijatovo: Nirefotra indray ny lacrymogène | GAZETY_ADALADALA
Ambohijatovo: Nirefotra indray ny lacrymogène
Posted on 12/06/2009 by gazetyavylavitra
Tafiditra teo Ambohijatovo ny mpomba an-dRavalomanana omaly. Nazava ny amin’iny satria nahazo taratasy fahazoan-dàlana ara-dalàna avy amin’ny mpiadidy ny tanàna ry zareo.
Rehefa nandeha nody anefa dia nisy ny fifandranitana teny an-dàlana, izay niafara tamin’ny fifampikasihan-tànana. Niteraka ratra ho an’ny andaniny sy ny ankilany izany iny omaly iny.
Re tamin’ny haino aman-jery isankarazany ny harivan’iny [sy araka ny fanentanan’ireo mpitarika teny an-kianja ihany koa] fa hijanona eo Ambohijatovo ny hetsika ataon’izy ireo hatramin’ny Sabotsy 13 jona.
Dia tonga teny tokoa àry ny olona, nefa efa teny an-toerana ihany koa ny mpitandro filaminana anaty Fiarabe niambina ny faritra.
Efa nomena ny Ministeran’ny Kolontsaina hikarakaràna hetsika ho an’ny ankizy ho fitsenana ny fetin’ny fahaleovantena mantsy ny kianja Ambohijatovo manomboka eto ka tsy misy fahazoan-dàalana hafa azon’ny mpiadidy navoaka intsony mandritra ity volan’ny ankizy ity. Aorian’io indray vao azo atao ny fifampidinihana amin’ireo izay mila manao hetsika eo.
Tonga maraina teny ny mpitarika (Randrianatoandro) ka nitaona izay tratrany teo hamonjy an’Ankorondrano (MAGRO) satria tsy azo atao ny miditra hanao amboletra tao anaty kianja. Niaiky izy fa taratasy lany andro no teny aminy. Ary izay mijanona eo tsy manaraka azy dia tsy olony fa mpanakorontana.
Fotoana elaela taty aorian’io koa dia tonga teny i ‘Satrobory’ ary nifampiraharaha tamin’ny kolonely iray.
reverend Ndrianalijaona 'Satrobory' mifanazava amin'ny mpitandro filaminana
Nitondra taratasy ingahy io nasehony ny mpitandro filaminana. Dika mitovy (photocopie fa tsy ny tena izy). Rehefa nojerena tsara anefa ny taratasy dia efa lany andro, satria voasoratra mazava tao, ary voatsipika mena fa natao ho an’ny andron’ny 11 jona ihany ny fahazoan-dàlana nangatahana.
Nitsotra tamin’ireo olona nanatona nihaino azy ingahy Reverend ary niaiky ampahibemaso fa azy ireo (mpitarika) ny hadisoana. ‘Tsy nitandrina izahay’, hoy izy. Ary dia nentaniny ireo olona efa nitangorona teo mba hamonjy an’i MAGRO.
Nampanantena moa ny mpitandro filaminana fa tsy hikitika ireto vahoaka ireto raha am-pilaminana sy tsy manelingelina ny filaminan’ny hafa ny zavatra ataony. Nilazàn’izy ireo àry i Reverend mba hitondra ny olony hiala ny faritra. Nanaiky ity farany. Saingy ireto olona niangaviana hamonjy an’Ankorondrano kosa no tsy nety nandeha avy hatrany fa hoe ‘aleo aloha ho betsaka kokoa ny olona vao miainga’.
Lasa ingahy Reverend, ary ireto olona tavela kosa rehefa nahavory maromaro ho namany, dia nanomboka nihogahoga sy nihantsy mpitandro filaminana.
Rehefa nandeha ny minitra sy ny segondra dia efa nanomboka voahodidina ihany ny mpitandro filaminana (na dia tsy tena voafefy tanteraka aza). Nahitàna olona nivorivory teo anoloan’ny tsangambato MDRM, teo amin’ny arrêt bus avy any amin’ny tunel, tery ambony akaikin’ny TELECEL taloha. Izany hoe raha mitambatra ireo dia ho voahodidina eo ambavahadin’ny kianja Ambohijatovo ireo mpitandro filaminana sy ny fiarabeny.
Niroso àry ny mpitandro filaminana nanatona ireo andian’olona nivorivory teo anoloan’ny faritra nitobian’izy ireo, ary rehefa nitohy ny hogahoga sy ny fihantsiana, niharo teny ratsy sy ompa, hatramin’ny fitorahana BIG BOSS, dia nirefotra koa ny baomba mandatsa-dranomaso voalohany teo Ambohijatovo.
Nanomboka ny fandosirana. Tsy nisy kosa anefa ny fanenjehana aloha hatreo.
Noho ny baomba lacrymogène iray nidona tamin’ny taribin-jiro JIRAMA dia nivily làlana ka namaky fitaratr’olona teo akaikin’ny College de France. Tafiditra tany anaty trano araka izany ny baomba ary dia tao no nijolofotra.
Voatery niantso ny mpamonjy voina avy ao Tsaralalàna araka izany ry zareo mpitandro filaminana mba hijery ny zava-misy sy hanao vonjy aina raha sanatria…
Ndeha ilaozantsika Ambohijatovo fa hikisaka kely amin’ny manodidina azy amin’izay isika ary ho tonga hatrany Faravohitra Antaninandro Ankadifotsy Ambatomitsangana.
Rehefa naparitaka àry ireo olona tsy nety nanaraka avy hatrany an’ingahy ‘Satrobory’, dia niakatra nankany Faravohitra ny sampany iray. Ity sampana ity no nametraka sakana (barrage) eraky ny arabe hatrany Antaninandro, Ankadifotsy Ambatomitsangana. Tonga hatrany Antanimena. Avy eo rehefa tonga ny mpitandro filaminana nanàla ny sàkana sy hanenjika azy ireo, dia nanao tari-dositra nankany Ankorondrano ry zalahy. Teto izany vao nisy ny fanenjehana , na fanosehana (fa tsy fisamborana) Izaho moa dia teny aorian’ny fiaraben’ny mpitandro filaminana teny foana nandritra izany rehetra izany.
Nopotehin-dry zareo daholo na sarona dalle, na sisin-jaridaina nolalovana, na ny rond point teo Antaninandro mba hahafahana manao sakana tamin’ireo toerana nolalovana.
Tsaroako etoana ny tenin’ilay mafana fo iray teny Ankorondrano (tety amin’ny sisiny io ary maro no nandre azy) fa tsy maintsy ataony izay tsy hahavanona ny Fetin’ny 26 jona.
Androany, raha niresaka tamin’ireo mpitandro filaminana teny Ambohijatovo aho, dia izao no teny nampitain-dry zareo: ‘Fetin’ny Foloalindahy ny 26 jona, koa iaraha-mahita eo izay sahy higafy an’izay, fa dia hataonay mahamay. Andramo moa hahitàna azy’.
Dia lasa ny saina. Fitiavan-tanindrazana manao ahoana re no mibaiko ny tsirairay e? Entanin’Ankorondrano tsy hanangana sainam-pirenena ny Malagasy rehetra amin’ny 26 jona. Fa maninona? Fa nahoana?
Ny ‘vidéo’ momba ny fiaikena nataon’i ‘Satrobory’ dia mbola eo an-dalam-pampidirana azy ao amin’ny Youtube aho ka ampidiriko eto ihany rehefa vita.
Vaovao azo farany: Nanapa-kevitra tsy hanohy intsony ny dinika etsy amin’ny Carlton ny solontenan’ny HAT
Filed under: fiaraha-monina, politika, tantaram-pirenena, tapatapany | Tagged: lacrymogène, Magro, Ravalomanana, Satrobory, TIM |
« ITAOSY: Tapaka ny lalana eny Nanaitra ny maro io maraina io – famonoan-tena sa…? »